World cup 2014 fixture | Infomala
विश्वकपको उद्घाटन खेल १२ जुनमा, ब्राजिल र क्रोएसिया भिड्ने (खेलतालिका सहित)
ब्राजिलमा हुने विश्वकप फुटबल २०१४ को समूह विभाजन तथा समूह चरणको खेलतालिका सार्वजनिक भएको छ । आगामी जुन १२ मा हुने उद्घाटन खेलमा ब्राजिल र क्रोएशिया भिड्नेछन् । खेल पंडितहरूले अयोजक ब्राजिलका निम्ति सजिलो समूह परेको विश्लेषण गरेका छन् । ५ पटकको विजेता ब्राजिलले के जुन १२ देखि नै धमाका पिट्ला ? र गृह मैदानको फाइदासँगै छैठैाँ पटक उपाधि लेला?
चाखलाग्दो रूपमा पछिल्लो विश्वकप फाइनलको पुनरावृत्ति हुनेछ, १३ जुनमा । समूह ख को यो खेलमा पछिल्लो विश्वकपका फाइनलिस्ट देशहरू स्पेन र हल्याण्ड भिड्दैछन् । हल्याण्डलाइ बदलाको अवसर मिलेको छ । के स्पेनलाइ हराउन सक्ने क्षमता होला?
मेस्सी र रोनाल्डोलाइ उछिन्ने गरी अर्को फुटबलर स्टार पैदा होला ? यी सबै जिज्ञासाहरूको जवाफ मिल्नेछ ब्राजिलमा ।
यहाँ तपाईँले खेलतालिका हेर्न सक्नुहुनेछ-
समूह चरणको खेलतालिका
उपरोक्त समय GMT हो । नेपाली समय GMT भन्दा ५ घण्टा ४५ मिनेट अगाडि छ ।
Previous Postफुटबल विश्वकप २०१४ का उत्कृष्ट दस: देशमा ब्राजिल र खेलाडिमा मेस्सी नम्बर एक